Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Port Royal ee Jadwalka Cruise Cusub ee Montego Bay
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa shaaca ka qaaday in TUI, oo ah shirkadda ugu weyn ee dalxiiska adduunka, ay Port Royal ku dartay jadwalkooda Janaayo 2022. Waxa uu tilmaamay in shirkaddu ay xaqiijisay inay dib u billaabeen duullimaadyadoodii iyo safarradii ay ku tagi jireen Jamaica, iyadoo howlaha dalxiiska la qorsheeyay inay billaabaan bisha Janaayo. Shirkaddu waxay si gaar ah u qeexday qorshayaasha guri-dejinta ee Montego Bay, iyo ka mid noqoshada wicitaannada Port Royal ee jadwalka safarkooda.
TUI, mid ka mid ah hawl-wadeennada dalxiiska ee ugu weyn Jamaica iyo la-hawlgalayaasha qaybta qaybinta ee warshadaha dalxiiska, ayaa xaqiijiyay hawlo soo daabulid ah oo loogu talagalay dalxiiska Montego Bay.
Maamulayaasha shirkadda ee TUI ayaa kula taliyay in xogtoodu ay muujinayso in baahida loo qabo socdaalka Jamaica uu sarreeyo.
Awoodda hawada ee xilliga jiilaalka waxay noqon doontaa 79,000, taas oo 9% kaliya ka yar tirooyinka jiilaalka kahor COVID.
Ogeysiiskan waxaa laga sameeyay Dubai dhowaan, intii lagu gudajiray kulan ay ka qeyb galeen Wasiir Bartlett, Agaasimaha Dalxiiska Donovan White, iyo TUI Group fuliyeyaasha: David Burling-Maamulaha Suuqyada iyo Diyaaradaha, iyo Antonia Bouka-Madaxa Xiriirka Dowladda & Siyaasadda Dadweynaha-Goobaha.
"Maanta TUI, oo ah mid ka mid ah hawl-wadeenada dalxiiska ee ugu weyn iyo la-hawlgalayaasha qaybta qaybinta ee warshadaha dalxiiska, ayaa xaqiijiyay hawlaha dib-u-dejinta ee safarka badda ee Montego Bay. Waxaa ka sii muhiimsan dhowr booqasho oo qorsheysan iyo wicitaanno loogu yeero Dekedda Royal Cruise Port, laga bilaabo Janaayo. Waxaan filaynaa inaan ku helno shan wicitaan laga bilaabo Janaayo ilaa Abriil 2022 Port Royal, "ayuu yiri Bartlett.
Intii lagu jiray wada -xaajoodkii TUI, maamulayaasha shirkaddu waxay ku taliyeen in xogtooda ay muujineyso in baahida safar -doonka ay aad u sarreyso oo ay ku guuleysteen inay sii haystaan ​​ballan -qaadyadii la baajiyay. Waxay sidoo kale wadaageen in awoodda hawada ee xilliga jiilaalka ay noqon doonto 79,000, taas oo kaliya 9% ka yar tirooyinka jiilaalka ka hor COVID.
Bartlett ayaa u xaqiijiyay madaxda TUI taas Jamaica ayaa weli ah meel nabdoon oo leh xaalado aad u hooseeya oo COVID-19 ah oo la isugu gudbiyo gudaha waddooyinka adkeysiga leh, iyo sidoo kale ololaha tallaalka ee shaqaalaha dalxiiska oo aad u adag.
"Wadada tallaalka shaqaalaha ayaa aad waxtar ugu leh Jamaica, iyadoo qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheenna ay doorteen inay si buuxda u tallaalaan. Waxaan rajaynaynaa in dhawaan aan u dabaaldegno 30-40% shaqaalaha dalxiiska Jamaica oo la tallaalayo iyo sidoo kale koror aad u weyn oo tallaalka dadkeenna intiisa kale marka la gaaro Janaayo, ”ayuu yiri Bartlett.
Wasiir Bartlett wuxuu xusay in isaga iyo kooxdiisu, ay sidoo kale wada -hadallo la yeesheen lamaanayaal kale oo muhiim ah oo ku sugan Dubai oo ku saabsan qorshayaasha lagu maal -gelinayo wax -soo -saarka dalxiiska ee Port Royal.
"Waxaan la yeeshay wadahadalo kale oo muhiim ah oo ku saabsan Port Royal, kuwaas oo laga yaabo inay arkaan waxqabadyo badan oo soo socda inta ka dhiman sanadka. Waxaan hadda uun soo gabagabeeyay wada -hadallo aan la lahaa DP World, taas oo keeni karta in horumar weyn laga sameeyo tahriibka Yurub ee gala Kariibiyaanka, inta badan Jamaica, iyadoo Port Royal ay tahay meel muhiim ah oo la tixgeliyo, ”ayuu yiri Bartlett.
“Waan ku faraxsanahay wada -hadalladeenna ilaa hadda halkan Dubai waana ka filayaa Jamaica waxay arki doontaa xoogaa maalgashi oo muhiim ah ka hawl-galkan halkan,” ayuu raaciyay.
DP World waa shirkad sahay oo caalami ah oo Imaaraadku leeyahay oo fadhigeedu yahay Dubai. Ururku wuxuu ku takhasusay saadka xamuulka, adeegyada badaha, hawlaha terminal -ka dekedda iyo aagagga ganacsiga xorta ah. Waxaa la aasaasay 2005 ka dib markii ay midoobeen maamulka dekedaha Dubai iyo Dubai Ports International. DP World waxay gacanta ku haysaa ilaa 70 milyan oo konteenar oo ay keenaan ku dhawaad ​​70,000 oo markab sanadkiiba, taas oo u dhiganta qiyaastii 10% taraafikada konteenarrada caalamiga ah oo ay ku xisaabtamaan 82 -ka xarumood ee badda iyo berriga ee ka jira in ka badan 40 dal. Ilaa iyo 2016, DP World waxay ahayd hormuudka dekedaha caalamiga ah, tan iyo markaasna waxay heshay shirkado kale kor iyo hoos silsiladda qiimaha.